प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेकपाका युवा नेताहरुले विभाजन रोक्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पार्टी विभाजन गनै खोज्नेले २०५६ सालमा माले शून्य सीट हासिल गरेको स्मरण गर्न आग्रह गरिन् ।
‘यो अलमल के को अलमल हो ? विचारधाराको कि पदको ? तपाईंहरुले हामीलाई कस्तो पार्टी हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ ? सुदृढ पार्टी हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ कि खरानी पार्टी बुझाउँदै हुनुहुन्छ ?’ झाँक्रीले प्रश्न गरिन् ।
अर्का सांसद विशाल भट्टराईले पार्टी भित्रको विवाद गाइजात्रा जस्तो भएको भन्दै एकता बचाउनको लागि पार्टी कार्यालयमा धर्नामा बस्ने चेतावनी दिए ।
सांसद सुरेश राईले अहिले ६१ जनाले हस्ताक्षर गरेपनि सो संख्या बढ्ने बताए । हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूले अब कुनै पनि पक्षबाट चलाइने हस्ताक्षर अभियानमा आफूहरू सामेल नहुनेसमेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
हेर्नुहोस् सूची -